Edere site Tranquillus | Feb 14, 2022 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Arịrịọ mmụba ụgwọ ọnwa: maka otu gị
isiokwu : Ụgwọ ọrụ na 2022 otu ụtụtụ
Oriakụ X, Mr Y,
Anyị na-arụzi ọrụ kwa afọ na xxxxxx. N'oge mgbanwe anyị, anyị tụlere mmụba nwere ike ime maka ndị ọrụ m na maka onwe m.
Achọrọ m ime ka arịrịọ m sikwuo ike site n'inye gị ihe atụ a kapịrị ọnụ nke ọrụ ndị m jisiri ike rụzuo na ndị otu m.
Ntuziaka m na-edo anya mgbe niile yana usoro.
Ebumnobi na-abụkarị usoro nke a kọwapụtara nke ọma nke ndị otu otu ga-enweta ya
Ana m ege ntị mgbe niile
M maara nke ọma ka m ga-esi amata isi ihe siri ike nke onye ọ bụla ma tinye ha n'ihu maka ịga nke ọma nke ozi anyị.
N'ikpeazụ, na ngalaba m, ikuku dị mma nke ukwuu. Enwere nnukwu nkwekọ otu yana dynamism bara uru nye onye ọ bụla
onye ọ bụla na-eche ihu ọrụ ya, na-arụ ọrụ ya nke ọma, na-eji obi ya na-enye aka mgbe ọ dị mkpa.
Ọ ga-amasị m ka ị buru n'uche ihe ndị a niile dị m mkpa maka ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ, yana na ị na-enye ndị ọrụ m niile mmụba ụgwọ ọnwa maka afọ 2022. Ọ ga-abụ ezigbo nnabata maka ha na karịa ihe niile, obere nkwalite a ga-enye ha nnukwu nkwalite ịmalite afọ ọhụrụ.
Anọ m n'ezie n'aka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikwu maka ya ọzọ.
Biko nabata, Oriakụ X, Mazị Y, ekele m nke ukwuu.
Arịrịọ abawanye ụgwọ ọnwa: ngalaba mkpuchi ụlọ akụ
isiokwu : Ụgwọ ọrụ m na 2022
Kemgbe xxxxxx, ụlọ akụ were m ọrụ dịka onye ndụmọdụ.
Ọ bụrụ na m kwere ka m degara gị akwụkwọ taa, ọ bụ iji lebara otu isi ihe dị nso na obi m anya: ụgwọ ọrụ m maka afọ 2022.
Kwe ka m buru ụzọ kwusie ike na n'ọgwụgwụ Nọvemba, emezuru m ebumnobi niile nke i nyeworo m, ya bụ:
Ọtụtụ oghere akaụntụ sitere na xx na 2020 ruo xx na 2021
Ịdenye aha maka ọrụ ụlọ akụ na-enye maka ndị ahịa xx, ya bụ mkpokọta ego: xxxx euro.
Ndụ mkpuchi ndụ abawanyela nke ukwuu.
Agakwara m ọzụzụ niile ka m mara nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ego nke Bank na-atụ aro.
N'ikpeazụ, m na-enwe ọganihu n'ụzọ doro anya maka mkpuchi. Dịka ị gwara m n'oge ajụjụ ọnụ anyị n'afọ gara aga, nke a bụ ebe adịghị ike nye m. Ị nabatakwara na m na-agbaso ọzụzụ ọhụrụ, nke nyeere m aka nke ukwuu ime ihe ngosi m nye ndị ahịa.
Nke a bụ ya mere m ji kwe onwe m ịrịọ gị ajụjụ ọnụ ka m kparịta ụgwọ ọrụ m maka afọ 2022.
N'ezie, a ga m ahapụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ọzọ.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: onye enyemaka onye isi
Onye isi ụlọ ọrụ Madam, onye isi nchịkwa,
Onye ọrụ nke obere ihe owuwu anyị kemgbe XXXXXX, ejiri m ugbu a n'ọkwa onye enyemaka onye isi.
Ana m ekelekwa gị maka ntụkwasị obi ị tụkwasịrị m.
A na-amata nka m, nnabata m na itinye ego m mgbe niile. Na 2021, emere m ọtụtụ mgbanwe na ọ bụghị naanị wedata ụfọdụ ụgwọ ọrụ, kamakwa kwalite ndụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Enwere m ike ịnye gị ọmụmaatụ ole na ole dị mkpa:
Mụ na ụlọ ọrụ na-ehicha ihe kpara nkata nkwekọrịta na-enwetụbeghị ụdị ya. Ya mere, a na-ebelata ego uru ahụ site na xx%. Ọ bụ ezie na e mewo ka mma ọrụ nke ọkà okwu ọhụrụ wetara. Ime ụlọ ahụ mara mma nke ukwuu!
M na-arụkwa ọrụ na ọnụ ahịa ụlọ ọrụ na n'ebe ahụ kwa, m jisiri ike imeri ọnọdụ ka mma.
Anyị jikọtara ọnụ na-emepụta akwụkwọ akụkọ n'ime nke m dere akụkọ ole na ole.
N'ikpeazụ, m na-adị njikere mgbe niile ịza arịrịọ gị niile, ana m eme ngwa ngwa ime ihe ozugbo ịchọrọ.
Nke a bụ ya mere m ji kwe onwe m ịrịọ gị ka ị nweta mmụba ụgwọ ọnwa maka afọ 2022, nke ga-abụrụ m ezigbo agbamume.
Ya mere a na m atụ anya na anyị ga-ekwurịta maka isiokwu a ọnụ n'oge nhọpụta n'ọdịnihu nke ị ga-ekweta inye m.
Biko nabata, Madam Director, Maazị Director, ekele m nke ukwuu.
Arịrịọ abawanye ụgwọ ọnwa: onye nnọchi anya njem
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ kemgbe XXXXXX, m na-ejide ugbu a n'ọkwa onye ọrụ njem.
Amaara m nke ọma na nsogbu anyị niile na-enwe ugbu a emetụtala gị nke ukwuu nakwa na ị hụla ọtụtụ ihe isi ike. Agbanyeghị, ndoputa abawanyela ọzọ (karịsịa maka mpaghara dị iche iche nke France) na arịrịọ maka mgbazinye ụgbọ ala na-abawanye.
Nke a bụ ya mere m ji kwe onwe m ịrịọ gị oge ọhụhụ ka m kparịta ụgwọ ọnwa m na 2022.
Achọkwara m igosi na mmadụ abụọ n'ime ndị ọrụ ibe m ahapụla ụlọ ọrụ ahụ na m na-ahụ maka faịlụ ha ugbu a. A na m eso ndị ahịa xxx ebe na mbụ ọnụọgụ ha bụ naanị xxx. N'ikpeazụ, emere m ndoputa xxx na 2021, nke na-anọchite anya uto% ma e jiri ya tụnyere 2019, afọ mgbe ọrịa Covid na-emebebeghị.
Achọrọ m igosi mkpa m na itinye ego m na ụlọ ọrụ ahụ. Inweta ịrị elu ga-abụ ezigbo nnabata maka ọrụ m.
Anọ m n'ezie, n'aka gị niile ma ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ọzọ.
Arịrịọ abawanye ụgwọ ọnwa: Charterer
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ kemgbe XXXXXX, m na-ejide ugbu a n'ọkwa nke Charterer.
Ezigbo ọkachamara na nhazi nke ụgbọ njem, a na-ekesa ọrụ m dị ka ndị a:
Mmekọrịta ya na ndị ahịa nwere ngwongwo ibuga
Chọta onye na-ebu ga-enye ọrụ a
Kweekọrịta ọnụ ahịa
Gbaa mbọ hụ na agwara onye ọkwọ ụgbọ ala ihe ndị ahịa chọrọ
Lelee na ebufere ngwongwo ndị ahụ
N'ime ọrụ a, nke a na-eme naanị na ekwentị, enwere m mmekọrịta dị mma na ndị ahịa. A ghaghị ikwu na m wuru ezigbo netwọk nke ndị na-ebu ndị na-atụkwasị m obi na ndị nwere otu ụkpụrụ ọrụ dị ka m. Ya mere ana m anabata nke ọma na ndị niile mụ na ha na-arụkọ ọrụ nwere afọ ojuju. Aghọkwara m onye ha na ha na-arụkọ ọrụ maka ngwa ngwa na abụghịzi onye na-ebubata ihe.
Nke a bụ ya mere o ji dị m ka o ziri ezi n'oge nzukọ ikpeazụ anyị na-arịọ gị maka mmụba na ụgwọ ọnwa m maka afọ 2022. M na-enwere onwe m idebe ihe a niile n'akwụkwọ, n'ihi ya ị ga-enwe ike nyochaa mkpa m na ọchịchọ m. na-emekwu ihe mgbe niile, na-eme nke ọma mgbe niile.
Ka m na-eche mkpebi gị, m ga-anọrịrị n'aka gị niile.
Arịrịọ mmụba ụgwọ ọnwa: nnabata
Anyị ekwenyela ịrụ ọrụ mmezi m kwa afọ na XXXXXX. N'oge ajụjụ ọnụ a, ọ ga-amasị m ka anyị kwuo banyere ụgwọ ọrụ m maka afọ 2022. Ọ dị m ka m gosipụtara itinye aka na ụlọ ọrụ ahụ, karịsịa na ihe atụ ole na ole ndị a:
A na-edobe nnabata ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ na-enweghị atụ ka ọha na eze nwee ahụ iru ala
A na-eziga ozi na ngwugwu mgbe niile n'oge.
Edobela m usoro nkwukọrịta, site na Skype, iji gwa onye ọrụ ibe ọbịbịa nke ngwugwu
Ya mere ana m ekwe onwe m ịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa maka afọ 2022, nke ga-abụ ezigbo agbamume na nkwanye ugwu maka m. Ọbụna m dị njikere, n'ezie, iji rụọ ọrụ ndị ọzọ na ọrụ ndị ọzọ nwere ike imeziwanye ọrụ nke ụlọ ọrụ dị ka: ijikwa ụgbọ ala ụgbọ ala (mkpuchi mkpuchi, nyocha, nkwenye nke ụgwọ eletrik eletrik), mgbazinye. N'ezie, enwere m ike ịnye gị aro dị iche iche.
Ya mere a na m atụ anya na anyị ga-ekwurịta maka isiokwu a ọnụ n'oge nhọpụta n'ọdịnihu nke ị ga-eji obiọma nye m.
Arịrịọ mmụba ụgwọ ọnwa: onye zụrụ
Kemgbe XXXXXX, m na-arụ ọrụ nke onye zụrụ n'ime ụlọ ọrụ XXXXXX.
Site n'ihe ọmụma m banyere ọnọdụ ahụ na ahụmahụ m, enwere m mmetụta na m dị njikere taa iburu ibu ọrụ ọhụrụ.
Kwe ka m buru ụzọ chịkọta ebe a n’okwu ole na ole, ozi dị iche iche m rụrụ nke ọma kemgbe m bịarutere.
Eguzobere m ndị na-enye ọrụ ọhụrụ nke mere ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ike ibelata ọnụ ahịa akụkụ anyị nke ọma.
Agụgharịrị m onyinye niile sitere n'aka ndị na-ebubata ngwaahịa anyị kacha ochie wee jiri ha degharịa nkọwa anyị.
M kparịtara ụka maka njedebe mmezi ka m wee nwee ike ịzaghachi ngwa ngwa maka mkpa ndị ahịa anyị.
N'ikpeazụ, m mụtara iri nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ na m hazie akpaka replenishment ka ngalaba mmepụta ghara mgbe ngwaahịa.
Dị ka ị maara, m na-agbachitere ọdịmma nke ụlọ ọrụ ahụ mgbe niile, m ga-anọgide na-eme ya, n'ihi na ọ bụ otú ahụ ka m si ahụ ọrụ m.
Nke a bụ ya mere m ji were nnwere onwe ịrịọ gị ka ị jiri obiọma nye m oge, n'oge dị gị mma, ka m kparịta ya.
Arịrịọ mmụba ụgwọ ọnwa: onye inyeaka ahịa
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ kemgbe XXXXXX, a na m ejide ugbu a n'ọkwa onye enyemaka ire ere.
A na-amata nka m, nnabata m na itinye ego m mgbe niile. N'afọ 2021, nsonaazụ enwetara na ọrụ ndị m na-ahụ maka ya mere ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ike melite ọrụ ya nye ndị ahịa. Ana m ahapụ onwe m, n'okwu a, ka m kpatụ ihe atụ ole na ole kpọmkwem:
Ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala, yana mmekorita m, ngwanrọ ọhụrụ maka ịbanye na nyochaa iwu ndị ahịa. Ya mere ana m emeso ọtụtụ ikpe kwa ụbọchị: XXXXXX kama XXXXXX gara aga.
Enwekwara m nzukọ kwa izu na onye ọrụ ibe m si n'ụlọ ahịa, nke na-enye m ohere iji nyochaa nke ọ bụla. Ya mere m na-achọpụta nkwurịta okwu ka mma n'etiti ngalaba anyị, nke na-enye m ohere ịzaghachi ndị ahịa anyị nke ọma ebe ọ bụ na m nwere ike ịnye ha ngwọta ozugbo.
N'ikpeazụ, amụtara m nkuzi Bekee n'ime afọ niile site na CPF, site na vidiyo, na mgbede n'ụlọ. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ọzụzụ onwe onye, ​​ma nkà ndị a kachasị na-etinye aka na uru nke ụlọ ọrụ ahụ ebe ọ bụ na m na-eji ha eme ihe kwa ụbọchị na-arụ ọrụ m.
M si otú ahụ na-ekwe onwe m ịrịọ ka a mụbaa ụgwọ ọnwa maka afọ 2022, nke ga-abụrụ m ezigbo agbamume.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: azụmahịa na-anọkarị
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ kemgbe XXXXXX, ana m ejide ugbu a n'ọkwa azụmahịa nke ịnọ naanị mmadụ
Kemgbe ụbọchị ahụ, emelitela m nkà m ebe ọ bụ na enwetara m ihe ọmụma teknụzụ niile dị mkpa iji zaa ajụjụ ndị ahịa na iji wepụta nkwuputa okwu. Esorola m ọtụtụ nkuzi nkuzi na anaghị m egbu oge ịjụ ngalaba mmepụta ka ha ghọta ka otu akụkụ si arụ ọrụ na usoro mmepụta ya.
Site ugbu a gaa n'ihu, m na-emeghachi omume na ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ ndị m na-eme ka akwụsịghị itolite. N’ezie, n’afọ 2021, emere m nhota xx ebe n’afọ 2020, ọnụọgụ ahụ bụ xx.
N'ikpeazụ, dị ka ị maara, etinyere m ego kpamkpam n'ọrụ m na m na-adị mgbe niile. Ndị ahịa m na-arụ ọrụ ga-egosi na m na-arụ ọrụ ndị ahịa ha mgbe niile.
Ya mere ọ dị m ka m na-emeziwanye mmekọrịta dị mma ma ndị na-atụ anya ma ndị ahịa anyị oge niile.
Azụlitela ntinye akwụkwọ nhọpụta ndị tozuru etozu. Nke a enyerela ngbanwe aka ịbawanye site na xx% afọ a.
Anọ m n'aka gị niile.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: onye na-akwụ ụgwọ 1
Iji sochie ajụjụ ọnụ anyị nke xxxxxx, ana m ahapụ onwe m idetu isi ihe ndị ewelitere gbasara ụgwọ ọrụ m maka afọ 2022.
Nke mbụ, ọ ga-amasị m ichetara gị na m na-arụ ọrụ dị ka onye ndekọ ego kemgbe xxxxxx n'ime ụlọ ọrụ YY na ọrụ m masịrị m nke ukwuu.
Anyị tụlere ọnụ ọrụ ndị emere na 2021 wee gosi na ị nwere ekele maka itinye ego m na karịa ihe ịga nke ọma nke onye ọ bụla.
N'ihi ya, m guzobere akwụkwọ nguzozi ego kwa ọnwa nke nyeere gị aka ime mkpebi na ijikwa ụlọ ọrụ ahụ dịka o kwere mee.
Etinyere m nleba anya nke ọma maka ịkwụ ụgwọ ndị ahịa na ekele maka nke a, ebelatala ụgwọ ndị pụtara ìhè. Na 2020, anyị nwere nchikota nke………… na igbu oge nke…….. ụbọchị ebe na 2021 ego bụ…. na ọnụọgụ nke ụbọchị bụ ugbu a………….
Ya mere ana m ekwe onwe m ikwughachi arịrịọ m maka mmụba ụgwọ ọnwa maka afọ 2022, nke ga-abụrụ m ezigbo agbamume.
O doro anya na m nọ n'aka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikwu maka ya ọzọ.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: onye na-akwụ ụgwọ 2
Ebe ọ bụ na xxxxxx n'ime Ụlọ ọrụ ahụ, m na-arụ ọrụ nke onye na-edekọ ego ma na m na-elekọta ndị ọzọ kpọmkwem nke ọha mmadụ.
Afọ abụọ ikpeazụ a 2 na 2020 abụrụla m nke ukwuu. Ọrịa ọjọọ na-enwetụbeghị ụdị ya na ọnọdụ mgbagwoju anya anyị na-aghaghị ijikwa mere ka m kwekọọ n'okwu dị iche iche. Na-enweghị ọzụzụ, ọ dị mkpa ịmepụta ngalaba ọhụrụ na nkwụnye ụgwọ. M na-ahụkwa maka nkwụghachi ụgwọ nke enweghị ọrụ na mmekọrịta niile na nchịkwa. N'oge nyocha ya, onye ego ego ahụ kwusiri ike na ọ nweghị njehie.
Ahụmahụ a enyerela m aka nke ukwuu ma ọ dị m ka ewereworị ihe ịma aka ahụ nke ukwuu. Etinyela m ego nke ukwuu ka ọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma nakwa ka ndị ọrụ ibe m ghara ịta ahụhụ, na mgbakwunye na mmebi nke ọrịa a kpatara, nsogbu ndị ọzọ.
Ya mere ọ ga-abara m ezigbo uru ma m nwee ike nweta mmụba n'ụgwọ ọnwa m.
O doro anya na m nọ n'aka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikwu maka ya n'oge oge atọrọ.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: Mmepụta
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ kemgbe XXXXXX, m na-ejide ọnọdụ onye nrụpụta ugbu a.
Kemgbe ụbọchị ahụ, m na-aga n'ihu na-akwalite nkwalite ngwa dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka ị maara, eduzila m ọtụtụ ọrụ ndị rụpụtara ahịa.
Abụkwa m nkwado ndị ahịa maka iji webụsaịtị ọhụrụ anyị na ihe niile na-aga nke ọma.
N'ikpeazụ, m na-emepe emepe ugbu a ngwa nke ga-agbanwe ụzọ anyị si arụ ọrụ ma na-echekwa oge dị oké ọnụ ahịa maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile.
Enwere m ihe okike, m na-eji usoro kachasị mkpa eme ihe mgbe niile iji nweta sistemụ kọmputa a pụrụ ịdabere na ya na nke nwere ọgụgụ isi. Ana m etinye ego n'ọrụ m kpamkpam yana enwere m mgbe niile.
Ya mere, ọ dị m ka m na-eme ka ọrụ onye ọ bụla dịkwuo mma. M n'ezie na-eme nyocha mgbe niile ka teknụzụ ọhụrụ si agbasa, ana m elelekwa ka ewepụtara webụsaịtị ndị asọmpi anyị.
Rịọ ka abawanye ụgwọ ọnwa: pebe niile 1
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ gị maka afọ xx, ana m ejide ọnọdụ ugbu a.
N'ime ọnwa ole na ole ugbu a, achọpụtara m na ị na-enye m ọtụtụ ọrụ m ga-arụ na ọtụtụ ọrụ. Enwere m obi ụtọ na obi ụtọ isonye na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka ihe ịrụ ụka adịghị ya na ị chọpụtala, anaghị m agụ oge awa m, m na-achọsi ike, m na-arụ ọrụ m mgbe niile n'oge na nkà m esiwokwa na ya pụta.
Nke a bụ ya mere m ga-eji chọọ irite uru na mmụba ụgwọ ọnwa maka afọ 2022. Ụgwọ m ga-akwụ mgbe ahụ ga-adaba na ọrụ m.
Ụlọ ọrụ ahụ na ọkwá m na-emezu n'ụzọ zuru ezu ihe m tụrụ anya ya. Enwere m afọ ojuju na enwere m ekele maka uru ndị ọrụ ibe m bara. Anyị na-akwado ibe anyị mgbe niile ma nwee naanị otu ebumnuche: afọ ojuju nke ndị ahịa anyị.
Nke a bụ ihe mere m ga-eji chọọ ịnwe oge iji kparịta arịrịọ m ọnụ.
Anọ m n'ezie n'aka gị maka ụbọchị na oge ajụjụ ọnụ a.
Rịọ ka abawanye ụgwọ ọnwa: pebe niile 2
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ kemgbe XXXXXX, m na-ejide ọnọdụ xxxxx ugbu a na anyị nwere ajụjụ ọnụ na xxxxxx.
N'oge ajụjụ ọnụ a, ị kwuputara ọtụtụ isi ihe maka imeziwanye:
Ọtụtụ mperi mkpope dị na ozi m
Ya mere, ewebara m n'uche isi ihe abụọ a nke dị m ka ọ dị oke mkpa. Enwere m ike imeziwanye nkà m. N'ezie, site n'enyemaka nke CPF, m gbasoro ọzụzụ n'asụsụ French na karịsịa n'ịsụpe na ụtọ ụtọ. N'ime awa XX niile nke nkuzi. Oge mmụta ndị a nyere m aka imeziwanye ide ozi m nke ọma. Ị gwara m nke a, nke m nwere ekele dị ukwuu.
Banyere nzaghachi m, ekpebiri m iji, dịka ị tụrụ aro, Outlook iji debanye aha na ịhazi ọrụ niile m ga-eme n'ụbọchị. N'ihi ya, anaghị m echefu ọzọ na m na-ahụ na-emecha ha niile na n'oge. Onwe m, a na m achọta usoro ọhụrụ a ụfọdụ nkasi obi nke ọrụ na karịa ihe niile, enwere m obi iru ala.
Atụrụ m anya na ị nwere ekele maka mbọ mgbanwe a na mbọ m na-agba imeziwanye.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: ọkàiwu
Ọkachamara na iwu, a bụ m onye na-agwa gị na onye ndụmọdụ nwere ohere maka nsogbu iwu ụlọ ọrụ niile.
Kpọmkwem, m na-ahụ maka ịgbachitere ọdịmma gị gbasara akụrụngwa ụlọ ọrụ, yana ngwa patent niile na nchekwa ha.
Ana m eme elekere asọmpi ma anaghị m egbu oge itinye aka ma ọ bụrụ na enyo enyo nke mbipụta nke patent gị. M na-echebe ọdịmma nke ụlọ ọrụ kwa ụbọchị.
N'afọ a, m gbasoro faịlụ YY nke mere ka anyị nwee oke nchegbu, ọ were ogologo oge iji guzobe site n'enyemaka nke ndị ọka iwu, ọ bụ ihe mgbagwoju anya. Ma, arụrụ m ọrụ nke ukwuu, achọkwara m ma chọpụta mmejọ niile nke ndị iro anyị. Anyị wee pụta mmeri!
M na-enyochakwa nkwekọrịta niile, ihe ize ndụ ndị nwere ike ime, m na-ekiri evolushọn nke iwu. Enwere m ike na ngalaba niile nke ụlọ ọrụ ahụ iji zaa ajụjụ niile wee lelee na ihe niile dị n'usoro.
Ị mara ugbu a mkpa m, nnweta m na ogo ọrụ m.
Nke a mere m ji kwe onwe m ịrịọ gị maka mmụba na ụgwọ ọnwa m maka afọ 2022.
Anọ m n'aka gị ka m kwuo banyere ya mgbe ịchọrọ.
Rịọ ka abawanye ụgwọ ọnwa: onye na-echekwa ihe
isiokwu: Ụgwọ ọrụ m na 2022
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ kemgbe XXXXXX, m na-ejide ugbu a n'ọkwa nke onye na-echekwa ụlọ ahịa, onye njikwa ụlọ nkwakọba ihe.
Ezigbo ọkachamara na nhazi na nkwadebe nke iwu, ị nyere m, na 2021, ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ
Anyị goro onye njikwa ọhụrụ. Ya mere, m ga-edozi iwu ya ka ọ dịrị njikere, lelee ọrụ ya site n'oge ruo n'oge ma nyere ya aka mgbe ọ dị mkpa.
Ana m ejikwa nlekọta nke ụgbọ mmiri ebuli elu
Ana m etinye iwu ndị ahịa na ERP
Ana m etinyekwa iwu ndị na-ebubata ya
Obi dịkwa m ụtọ nke ukwuu maka ntụkwasị obi ị tụkwasịrị n'ime m, ana m ewerekwa ọrụ ọhụrụ m nke ọma. Enwere m ike ịsị na e mezuru m n'ọrụ m.
Dịka ị kwuworo, anyị enweela mperi efu na iwu ndị ahịa n'afọ a. Na mgbakwunye, emebela m mmekọrịta na ndị na-ebu ibu ma ebe ahụ, anyị enweghị nsogbu ma ewezuga igbu oge nnyefe 3 na 2021.
M na-anọkarịkwa na-akpakọrịta ndị ahịa maka mbupu ngwongwo na ihe niile na-aga nke ọma.
Arịrịọ mmụba ụgwọ ọnwa: ire ahịa
Anyị nwere ajụjụ ọnụ m kwa afọ na xxxxxx mgbe anyị tụlere nkwụghachi ụgwọ 2022 m na mmụba enwere ike.
Achọrọ m ime ka arịrịọ m sikwuo ike site n'inye gị ihe atụ akọwapụtara nke ọrụ na-aga nke ọma:
Ụlọ ọrụ ahụ dị ugbu a karịa na netwọk mmekọrịta. Kwa ụbọchị, m na-etinye foto nwere ederede kacha adọta anya. Maka nke a, m na-akpọtụrụ ndị na-ere ahịa ahịa nke m na-anakọta ozi gbasara ndị ahịa na iwu anyị nwetara yana saịtị ndị anyị sonyere na ya.
Ugbu a, anyị na-ezigara ndị ahịa anyị akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị iri na ise. M na-ede ya kpamkpam na m na-elekọta nkesa.
N'ikpeazụ, ị chọpụtara na m na-etinye aka na ụlọ ọrụ ahụ. Abụ m isi iyi nke echiche ọhụrụ na nke mbụ. Ana m anabata kpamkpam nkatọ nke m na-agbaso n'usoro na atụmatụ mgbochi. M na-achọ azịza mgbe niile.
Ya mere ana m ekwe ka m jụọ gị ọzọ maka mmụba ụgwọ ọnwa maka afọ 2022. Nke a ga-abụ ezigbo nnabata maka uru ọrụ m bara.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: odeakwụkwọ ahụike
Onye ọrụ ụlọ ọrụ gị kemgbe XXXXXX, ana m ahapụ onwe m ịrịọ gị maka oge ị ga-ekwurịta ụgwọ ọnwa m na 2022.
Nke mbụ, ọ ga-amasị m ikele gị maka ntụkwasị obi ị tụkwasịrị m.
A na-amata nka m, nnabata m na itinye ego m mgbe niile. N'afọ a, ewerela m ọtụtụ atụmatụ nke m ji n'aka na ebutela ọganihu dị ukwuu na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
A na-edobe ụlọ ahụ nke ọma ma na-asachapụ ya mgbe niile. Etinyela m ebe, dịka ị jụrụ m, nwanyị na-ehicha ihe na-abịa ugboro 2 ruo 3 n'ụbọchị. Ya mere, ọ bụ nchekwa maka ndị ọrịa, kamakwa maka anyị.
A na-eme nhọpụta dịka ọchịchọ gị na usoro gị siri dị. Anyị na-arụ ọrụ na mmụọ otu dị mma ma anyị nwere otu ụkpụrụ: iji nye ndị ọrịa gị nlekọta dị mma.
A na-edepụta nkeji nke ndụmọdụ ngwa ngwa mgbe nleta ọ bụla ma zigara ndị ọrụ ibe gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Enweghị m igbu oge.
N'ikpeazụ, m na-anọ mgbe niile ma anaghị m agụ oge awa m ma ọ bụrụ na ndị ọrịa gị chọrọ m.
Nke a bụ ya mere m ga-eji chọọ ka anyị were oge na-ekwurịta banyere isiokwu a n'oge nhọpụta n'ọdịnihu nke ị ga-eji obiọma nye m.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa: onye ọrụ nka
Anyị zutere n'oge na-adịbeghị anya maka ajụjụ ọnụ nke onye ọ bụla, xxxxxx. N'oge mkparịta ụka a, arịọrọ m ka e nwekwuo ụgwọ ọrụ m maka afọ 2022. Achọrọ m idetu isi ihe niile anyị kwuru n'akwụkwọ iji gosi gị omume niile m mere:
M na-esokarị ndị na-ere ahịa na ndị ahịa iji nye nkwado teknụzụ
M na-enyere aka mmepụta tupu mmalite nke akụkụ ọhụrụ na ịlele na ihe niile dị n'usoro
M na-aza site na ekwentị na email nye ndị ahịa nwere ajụjụ ọrụ aka ịjụ
Ana m elele ọnụ okwu ọ bụla
M na-ewepụta atụmatụ maka nkwado
Ya mere, echere m na nkà ndị a niile bụ ezigbo uru agbakwunyere na ụlọ ọrụ ahụ.
Enwere m onwe m karịsịa. Azịza m bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya na ngwa ngwa.
Anọ m n'ezie n'aka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikwurita ụgwọ ọnwa m ọzọ.
Daalụ mbụ maka nghọta gị na agbamume m nwetara n'aka gị n'oge ajụjụ ọnụ m kwa afọ.
Rịọ ka abawanye ụgwọ ọnwa: teleprospector
Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ kemgbe XXXXXX, m na-ejide ugbu a ọnọdụ nke telemarketer.
Kemgbe ụbọchị ahụ, enwetara m ahụmịhe siri ike nke na-enye m ohere ịgafe ebumnobi niile etinyere nke ukwuu.
N'ezie, dị ka ọnụọgụgụ, abụ m otu n'ime ndị na-ere ahịa telemarket kacha mma:
M jisiri ike ịkpọ xxx oku kwa ụbọchị
Ana m enweta ụbọchị xx
M jisiri ike mechaa ọtụtụ iwu
Akụkọ m, maka ndị na-ere ahịa, doro anya ma tinye ozi niile ha chọrọ maka nleta ha.
E jiri ya tụnyere 2020, a na m arụ ọrụ nke ọma karị, n'ihi na amaara m ngwaahịa m nke ọma ma enwere m ahụ iru ala na atụmanya. Aghọtara m mmeghachi omume ha ugbu a, ana m atụ anya nzaghachi ha ma akwadola m arụmụka iji gafere nzacha mbụ.
Ọ bụ ọrụ siri ike nke ukwuu, n'ihi na ndị na-akparịta ụka anyị enweghị oge iji gwa anyị okwu, ana m achọta obere akpaokwu, obere okwu ma ọ bụ okwu nke ga-eduga na nhazi oge.
Nke a bụ ya mere m ji kwe onwe m ịrịọ gị ajụjụ ọnụ iji kparịta ụgwọ ọrụ m maka afọ 2022. Achọrọ m n'ezie nkwalite na agbamume n'aka gị ka ị nọgide na-arụ ọrụ nke ọma mgbe niile na ịbawanye ngbanwe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa site na email Ọnwa Abụọ 24, 2022Tranquillus
gara agaA na-agbatịkwu ikike enyere maka ezumike anabataghị n'ihi nsogbu ahụike
-esonụNdị ọrụ nọ na ezumike njem njem nwere ike irite uru na atụmatụ Mgbanwe mkpokọta
Otu esi emepụta mbinye aka email gị ozugbo ma ọ bụ n'efu